Mid kamid ah Dowladaha Yurub oo qiratay in ay bilowday dagaal dhanka internet-ka ah!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Mid kamid ah Dowladaha Yurub oo qiratay in ay bilowday dagaal dhanka internet-ka ah!!
Mid kamid ah Dowladaha Yurub oo qiratay in ay bilowday dagaal dhanka internet-ka ah!!
Feb 25, 2017WARAR
Asigoo la hadlayay xildhibaanada Ruushka, Shoigu wuxuu yiri: “Waxaan leenahay ciidamada macluumaadka oo si wanaagsan u howlgali kara, kana awood badan sidii hore. Waxay ka hortagi karaan dacaayadaha”.
Ruushka wuxuu beeniyay hadallada reer Galbeedka ee ah inay “warar been ah faafinayaan”.
“Xukuumadda Moscow waxay hadda isu diyaarinaysaa inay bedesho fikradaha shucuubta dunida. Waxay faafindoonaan qaladaadka iyo saxnaanta dagaallka”, ayuu yiri Giles.
Taliyihii hore ee ciidamada Ruushka, Yuri Baluyevsky, ayaa sheegay in guul ay ka gaareen “dagaalka raadinta macluumaadka”.
“Dagaaalkan wuxuu aad uga muhiimsan yahay midka militariga ee hubka la isu adeegsado, sababtoo ah dagaalka noocan ah dhiig kuma daadanayo ayada oo saameyn weyn la geysanayo lana curyaaminayo cadowga iyo awoodooda”, ayuu yiri Baluyevsky.
Previous PostMaxkamadda ICJ oo Kenya u qabatay in dhamaadka sanadkan soo gudbiso jawaabta dacwada Badda! Next PostDaawo: Dhacdooyin Argagax iyo Naxdin badan oo Ka bilowday Hargeisa iyo Gabadh La Sixray oo ka Warbixisay!